कांग्रेसको नजरमा बजेटः हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा ! | suryakhabar.com
Home आर्थिक कांग्रेसको नजरमा बजेटः हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा !
कांग्रेसको नजरमा बजेटः हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा !
on: १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार ११:३५ In: आर्थिकTags: No Comments
काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७५र७६ को बजेट निराशाजनक भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेले प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेसले यस बजेटले अर्थतन्त्रमा कुनै उत्साह ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको हो । आजको कारोबारको पृष्ठ २ मा यो समाचार छापिएको छ ।
निर्वाचनको बेलामा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रलाई मैले सपनाको पुलिन्दा भनेको थिएँ । त्यो एउटा सपिङ लिस्ट थियो । कतिपय अवस्थामा बजेट त्यसबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । वितरण नगर्ने भन्दाभन्दै पनि बजेटमा २५ अर्ब रुपैयाँ जति विभिन्न शिर्षकमा बाडिएको छ । त्यसकारण बजेट राजनीतिक नाराबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । -डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
बजेट निराशजनक छ । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै उत्साह सञ्चार गर्न सक्ने देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएका कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छैन । चुनावी घोषणापत्रमा बाँडिएका सपनाको त नजिक पनि पुगेको छैन । जनतालाई यो बजेटले निराश बनाएको छ ।ु (डा। प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा
आफूलाई शक्तिशाली बताउँदै आएको सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७५र७६ को बजेट हेर्दा खासै केही देखिएन । बजेट आउनु अघि के के नै आउला जस्तो ठूलो हल्ला गरिएको थियो । तर, बजेट हेर्दा हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा १जस्तो मात्र छ । चुनावमा बाँडिएको सपना र घोषणापत्र, केही समय अगाडि जारी गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जारी बजेटबीच तादम्यता टुटेको छ । -विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारलाइ खुसीको खबर
१६ जेष्ठ २०७५, बुधबार ११:३५